नेपालमा सयपत्री फूल प्राय तिहार अथवा भाइ टिकामा तथा अन्य चाडपर्बहरुमा मालाहरु बनाउनको लागी, घर भित्र कोठाहरु सजाउनको लागी, गमलाको लागी, फुलवारी आकर्षित गनको लागी तथा विबाहमा कारहरु सजाउन धेरै प्रयोग हुन्छ । प्राय जुनसुकै हावापानी तथा माटोमा सजीलै खेती गर्न सकिने, लामो फूलफूल्ने समय हुने र आर्कषण फूल हुनाले सयपत्री फूलप्रति किसानहरुको आर्कषण बढ्दै गईरहेको छ ।
नेपालमा सयपत्री फूलको खेती तराई तथा मध्य पहाडका जिल्लाहरुमा सफलता पुर्वक गर्न सकिन्छ र धनुषा जिल्ला यस फूल खेतीको लागी अग्र स्थानमा आंउछ । सयपत्रीको खेती समुद्री सतहबाट १५० मिटर देखि २००० मिटर सम्म सफलता पूर्वक गर्न सकिन्छ । सयपत्रीको खेतीको लागि १५ देखि २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा विरुवाको राम्रो वृद्धि हुने र फूल चाँडै फुल्ने गर्दछ ।
माटोको पि.एच. ५.५—६.५ सम्म राम्रो मानिन्छ । यो खेती गर्न प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ भएको बलौटे दोमट माटो राम्रो हुन्छ ।
सयपत्रीको विउ कोकोपिट प्रयोग गरी नर्सरी ट्रेमा जमाउन सकिन्छ । ट्रेमा जमाएको विउ १८ देखि २० दिनमा बेर्ना सार्नको लागि उपयुक्त हुन्छ ।
सयपत्रीको विउ २० देखी २५ डिग्री सेल्सीयसको तापक्रम भएको अवस्थामा राम्रो हुन्छ । यदि बर्खाको समयमा नर्सरी व्याड बनाउने हो भने नर्सरीलाई १५ से.मी. उचाई गरेर बनाउनु पर्दछ जस्ले गर्दा धेरै भएको पानी तर्कीएर जान सकोस । विउ रोप्दा धेरै बाक्लो गरेर लगाउनु हुदैन जस्ले विरुवामा बेर्ना कुहिने रोग लाग्न सक्दछ । विउ रोपेको २० देखि २५ दिनमा बेर्ना सार्नको लागि उपयुक्त हुन्छ ।
सयपत्रीमा कटिङ् धेरै प्रकारले गर्न सकिन्छ; जस्तै हाँगाको कटिङ्, कमलो डाँठको, मध्यम डाँठको कटिङ् लिन सकिन्छ ।
जमिनको चारै तर्फ ३० सेन्टिमिटर गहिरो, ३० सेन्टिमिटर चौंडाईको कुलेसोको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ यदि निकासको व्यवस्था नभएमा यस फूलको जरा कुहिएर जाने हुन्छ । मलखाद सयपत्री फूल खेती गर्दा राम्रो पाकेको गोबरमल ३५ देखि ४० डोको र ६.५ किलो ग्राम नाइट्रोजन, ६ किलो ग्राम फसफोरस र ४.५ किलोग्राम पोटास प्रति कठ्ठा दरले राख्नु पर्छ । नाइट्रोजनको आधा मात्रा र फसफोरस र पोटासको पुरा मात्रा बेर्ना सार्ने समयमा प्रयोग गर्नु पर्दछ र बाकी आधा भाग नाइट्रोजनको मात्रा दुईपटक, वेर्ना सारेको ३० र ६० दिनमा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
सयपत्री फूलको बेर्ना करिब ५० सेन्टिमिटर ड्याङ देखी ड्याङ र ४० सेन्टिमिटर बोट देखि बोटको दूरी कायम गरी ड्याङको उचाई १०—१५ सेन्टिमिटर हुनुपर्दछ । प्रतिी कठ्ठा विरुवा १०००—१२०० अवस्यक पर्दछ । सरदर १५ देखि २० ग्राम विउ प्रति रोपनी जग्गाको लागी आवस्यक पर्दछ ।
तिहारको लागि वर्णशङ्कर जात ३ महिन र लोकल जात ११० दिन अगाडि बिउ जमौन पर्दक्स। सयपत्री फूल वर्षै भरी लगाउन सकिन्छ । जाडोयाममा उत्पादन लिनको लागि कात्र्तिकमा बिउ रोपेर मंसिरबाट बेर्ना सार्न सकिन्छ, त्यसै गरि गर्मी समयको लागी माघमा बिउ रोपेर फाल्गुन महिनामा वेर्ना सार्न सकिन्छ र बर्खे समयको लागी असारमा विउ रोपेर साउनमा बेर्ना सार्न सकिन्छ । बढी तुषारो हुने ठाउँमा यसको खेती गर्न कठिनाई हुन्छ ।
जमिनको तयारी र बेर्ना रोपण:
जमीनलाई २—३ पटक खनजोत गरी माटो मसिनो बनाउने र बेर्ना रोप्न लाइनमा कुलेसो वा प्वाल बनाई पाकेको गोबरमल १ किलोग्रामका दरले राख्ने र बेर्ना रोप्ने ।
अफ्रीकन जातको सयपत्रीको बिरुवा अग्लो (९० से.मी.) हुने भएकोले हांगाबिंगाहरु कम हुन्छन, त्यसैले बिरुवा सारेको ३० दिनपछि टुप्पोलाई र्चुडेर फालीदिनु पर्दछ । यसो गर्नाले हांगाबिंगाहरु बढी हुने, बिरुवाको फैलावट बढी र होचो बिरुवा भई एकै नासका धेरै फूलहरुको उत्पादन लिन सकिन्छ । यदि माटोको अवस्था राम्म्रो छ भने दुई पटक अर्थात बेर्ना सारेको ३० र ४० दिन पछि टुप्पोलाई चुडेर फालीदिन सकिन्छ र यसो गर्दा अझ उत्पादन बढाउन सकिन्छ । फ्रेन्च प्रकारको सयपत्रीको बोट होचो हुने भएकोले यो कार्य गर्नु पर्दैन । उत्पादन बढाउन तथा गुणस्तरीय फूल फूलाउनको लागी हर्मोनहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बेर्ना रोपेको २०—२२ दिनमा खेतमा आएको झारको अवस्था हेरी गोडमेल गर्नु पर्दछ । कुनै बिरुवामा कोपिला लागेको भए उक्त कोपिला चिमटेर हटाई दिनु पर्दछ । यसरी कोपिला हटाई दिँदा बोट झ्याङ्गिएर राम्रो सँग फैलीन्छ ।
फूल टिप्ने अवस्थाले फूलको गुणस्तर निर्धारण गर्ने हुनाले सयपत्रीको फूल राम्म्ररी फक्री सकेपछि टिप्नु पर्दछ । फूल टिप्दा घाँम अस्ताइसकेपछि वा घाम नलाग्दै बिहानको समयमा डाँठ सहित टिप्दा फूलको गुणस्तर लामो समय सम्म राम्रो हुन्छ । अफ्रीकन सयपत्रीको थुंगा एक साइजको फुल्ने भएकोले मालाका लागि एकदम उपयुक्त मानिन्छ र बजार मूल्य पनि राम्रो हुन्छ । सामान्यतया अफ्रीकन सयपत्रीको फूलको उत्पादन ३०० देखि ४०० किलो ग्राम प्रति कठ्ठा हुन्छ ।
Previous articleबालीनालीको कीरा व्यवस्थापनमा वनस्पतिको प्रयोग
Next articleसुन्तलाजात फलफूलमा नर्सरी स्थापना, माउबोट उत्पादन तथा रेखदेख